Apple Inoburitsa Yechipiri Veruzhinji Beta yeMacOS Yakakwira Sierra 10.13.2 | Ndinobva mac
Apple inotangisa yechipiri yeruzhinji beta ye macOS High Sierra 10.13.2
Apple yakaburitswa nezuro masikati yechipiri yeruzhinji beta vhezheni yevashandisi vakanyoreswa muchirongwa che beta. Iyo yekuvandudza vhezheni yakatangwa neMuvhuro uye maawa gare gare vhezheni yevashandisi vakanyoreswa muchirongwa ichi cheMacOS beta yasvika.
Iwo matsva maficha akaiswa mune ino beta 2 zvakajairika kugadzirisa kuita kwesisitimu, kugadzikana, uye kugadzirisa kwekuchengetedza nyaya neWPA2, chimwe chinhu chatove kana chinofanira kugadziriswa mune idzi beta shanduro. Ichokwadi ndechekuti nhau idzi dziri shoma asi dzakakosha.
Kuuya kwekutanga kweiyi nyowani yeruzhinji beta chiratidzo chinoratidza kuti hapana matambudziko mukushanda kwakawanda mune beta vhezheni yevagadziri uye nekudaro inoshanda zvizere kusunungura seyakaitika beta. Kana iwe uri mumwe wevashandisi vanoda kutora chikamu mune macOS High Sierra yeruzhinji betas, tinokurudzira kushandisa chipatara kunze kwenzira yako yekushandisa zvisinei nekuti zvese zvinoshanda chaizvo kubva pakutanga. Usakanganwa kuti kumwe kunyorera, maturusi kana mashandiro anogona kunge asingaenderane ne beta vhezheni. Chero zvazvingaitika, kana iwe uchifarira kutora chikamu, chinongedzo chekunyoresa uye kugamuchira idzi shanduro vasati vazhinji vevashandisi vagamuchira iyo yepamutemo vhezheni. tinobva pano.
Iko kuvandudzwa kwakaitwa mune ino nyowani beta 2 vhezheni yakaburitswa yevanogadzira nevashandisi vari kutora chikamu mune yeruzhinji beta chirongwa, Izvo hazvisi kuwedzera hukuru hwekushongedza zvigadzirwa, kana nezve mashandiro eAPFS system pane zvisingaenderane zvehurongwa neFusion Drive, asi ivo vanowedzera kugadzirisa mukuchengetedza, kugadzikana uye kuita kwesisitimu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Apple inotangisa yechipiri yeruzhinji beta ye macOS High Sierra 10.13.2
Isu takaedza iyo Aukey KM-G6 LED-Backlit Inoshandura Bhuruu mechi keyboard
EU inomanikidza Apple kuti ibatanidze "Mapepa eParadhiso"